मुलुकको वर्तमान अवस्था र हाम्रो दायित्व – eRoyaltimes
विश्वमा भएका १० अतभूत रहस्यहरु
भारतबाट आएका एकै परिवारका ९ जनामा कोरोना सङ्क्रमण
राजनीतिक शक्तिहरुबीचको ध्रुवीकरण स्वागत योग्य ः २५+ समूह
Royal Times5months ago
यतिबेला मुलुकको अवस्था चिन्ताजनक छ । देशमा भद्रगोल अवस्था छ । दुई हजार युवाहरूलाई पछि लगाएर नेताहरू रमाइ रहेका छन् । तर लाखौं युवाहरू विदेशिरहेका छन् । अब लाखौं युवाले नेपालमै केही गर्न स्वदेश फर्कनु पर्ने बेला आएको छ । अब यि विदेशिएका युवाले नेपालको भविष्यप्रति चिन्ता लिने बेला आएको छ ।
देशमा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार अनियमितता महँगी छ । यो अवस्थामा हामी सबै नेपाली एकतावद्ध भएर यसको विरोध गर्नु पर्ने समय आएको छ । हामी विदेशबाट ल्याएर खानु पर्छ । कृषिमा परनिर्भर छौ । तर नेपाली युवाहरू विदेशिएका छन । ज्यानको माया मारेर विदेश जानु भन्दा यहि देशमा केही गर्नु पर्छ । अब यस्ता विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि केही बोल्ने समय आएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जनताको समस्या अवगत नै हुनु हुन्छ । यदि नेपाल प्रति माया गर्ने हो भने नेपालीको हित चाहाने हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले यस विषय उठाउनु उपयुक्त होला ।
हिजो सम्म हामीलाई छिमेकीको डर थियो भने अब त संयुक्त राष्ट्र संघ समेतको समेत आँखा चाही हाम्रो मुलुकमा गाडी रहेको बुझिन्छ । किन भने यो अथवस्था सृजना हुनुमा विश्वयुद्ध पनि निम्तिनु हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । एकातिर यो खतरा छ भने अर्कोतिर हाम्रो मुलुक त त्यसै रणमैदानमा परिणत होला कि भन्ने कुरामा तमाम राष्ट्रवादी, बुद्धिजिवी सजग हुने बेला आएको छ । साथै राष्ट्रवादी पत्रकारहरू कसैको मुख नताकी यो दल, त्यो दल, मेरो मान्छे, तेरो मान्छे नभनी निष्पक्ष ढंगले कलम चलाउनु पर्ने बेला आएको हो कि ? होइन भने हाम्रो मुलुक तिनै चप्पल छाप नेत्रहरूले बर्बादी तिर लगिरहेको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । एकातिर देशमा भ्रष्टाचार चुलिएको अवस्था छ भने ठूला भ्रष्टाचारमा पनि सत्तारुढसंगै प्रतिपक्ष समेत तै चुप मैचुप गरिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा आएका अकुत पैसा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले बाडेर खाएको हो कि झै देखिन्छ । यो अवस्थामा हामी राष्ट्रवादीहरूतर्फ जनताको नजर जानु स्वभाविक नै हो । अबको अवस्था पनि यस्तै रहयो भने हामी राष्ट्रवादीहरू सडकमा उत्रिने छौं । यदि देशमा भ्रष्टाचार रोकिने हो भने देश उधो लाग्ने छ र यो भन्दा धेरै राम्रो हुनेछ । देशमा व्यापक रुपमा महँगी बढिरहेको छ । यसमा जनताको लागि बोलि दिने कोही देखिदैन । यदि हामी पनि चुप बस्यौ भने जनता अझै बढी महंगीको मारमा बस्नु पर्ने छ । त्यसै अब भ्रष्टाचार, अनियमितता महँगीको विरुद्ध जाँगौ, उठौ, एक होउन ।
यस पटकको उपनिर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले भाग लिएन, किन भने हाम्रो पार्टीको संगठन नै थिएन । यस पटकको उपनिर्वाचन हेर्दा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काग्रेस बीचमात्र टक्राव देखियो । हामीले उपनिर्वाचनमा भाग नलिएर हामीले राम्रै ग¥यौ । काग्रेसले विगतमा जितेको केही ठाउँमा नेकपाले जित्यो, नेकपाले पहिले जितेको ठाउँमा काग्रेसले जित्यो । निर्वाचनमा भाग लिएका अन्य दलको स्थिति पनि राम्रो देखिएन । यसरी हेर्दा उपनिर्वाचन नेकपा र काग्रेसको नौटकी थियो । काग्रेस र नेकपाले उपनिर्वाचनमा आपसमा दुःख सुख साटे । तर जनताको मुद्दा उठाउन उनीहरू पनि चुके । अहिलेको स्थितिले त्यो कुरा स्पष्ट देखाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सभामुख खाली भएको चार महिना हुनै लाग्यो । तर सभामुख चयन भएको छैन । सत्तारुढ नेकपासंग स्पष्ट बहुमत छ तर सभामुख चयन हुन यति विलम्व हुनु ठूलो दुःखको कुरा हो । सभामुख चयन गर्न नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सभामुख गर्न बारम्बार बैठक बसे तर विवादमाथि विवाद भइरह्यो । बल्ल सभामुख तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । एउटा सभामुख चयन गर्न यति समय लाग्छ भने अन्य देशका महत्वपूर्ण कुरामा कति दिन लाग्ला ।
त्यसो त कालापानी सिमाबारे संसदमा स्पष्ट बहुमत रहेको सरकार तैचुप मै चुप गरिरहेका छ । त्यस विषयमा बोल्दा भारत रिसाउला भनेर नेताहरूले मौन धारण गरिरहेको देखिन्छ । यदि वर्तमान सरकार देश र जनताप्रति बफादार रहने हो भने मिचिएका सिमाबारेमा भारत सरकारसंग स्पष्ट कुरा राख्नु पर्छ । यो विषयमा ढिलाई गर्नु हुंदैन । जुन सुकै विषयमा ढिलाई गर्नु हुंदैन । जुन सुकै तहमा भएर पनि छलफल गरेर सिमा विवादको समाधान गर्नु पर्छ । आपसी वार्ता र छलफलबाटै नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान हुने हो । यो विषयमा हामी पनि सजग छौं । राष्ट्रवादीहरू यो विषयमा थप सजग हुनुपर्छ । अब देश बचाउने भनेको इमान्दार जनताले हो । यस्तैश्रमिक मजदुरहरू पिछडिएका वर्गहरू लगायत सबै राष्ट्रवादी देशप्रेमीहरू एकजुट भई अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
देशको महत्वपूर्ण विषय उठाउनु पर्ने समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेस आफ्नै पार्टीको किचलोमा रुमलिएको छ । सरकारले गरेका अनियमिततामा जनताको तर्फबाट बोलिदिने कोही छैनन् कि जस्तो भएको छ । संसद भित्र रहेका अन्य दल पनि सरकारले गरेका विवादास्पद निर्णयमा चुपचाप देखिन्छन् । एकातिर भ्रष्टाचार, अनियमितता वेतिथि बढ्नु, अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष काग्रेस आफ्नै घर झगडामा रुमलिनुले जनताले विकल्प खोज्नु स्वभाविक भएको छ । यहि बेला सानो रुपमा भए पनि हामी जनताको पदमा बोल्न अघि सरेका छौं, यसलाई स्वभाविक मानिदिनु होला । सत्तारुढ एकातिर प्रमुख प्रतिपक्ष अर्कोतिर आफ्नै घर झगडामा अल्झिरहेको समयमा राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने अवस्था आएको छ । विगतमा काठमाण्डौ महानगरपालिकावडा नं. २८ को वडाअध्यक्ष हुँदा मैले जनताको सेवा गरे । कतै आर्थिक अनियमित हुन्छ कि जनताले अन्याय भोग्नु पर्छ भनेर सजगभए । स्वतन्त्र रुपमा जनताको सेवा गरे । त्यतिबेला जनता खुसी थिए । अहिले पनि त्यहाँका जनता मसंग खुस हुन । जनताले देशै भर म जस्तै जनप्रतिनिधि खोजेको मैले पाएको छु ।
हिजो र आजलाई हेर्ने हो भने विगतमा धेरै राम्रो काम भएका थिए । जनताले आज सहि मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ ।
(लेखक चन्दन शाक्य हामी नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे तपाईको धारणा बताइ दिनुस न ? एमसिसी नेपालका लागि उपयुक्त छैन । पहिला जनता माझ गएर जनताको राय सुझाव बुझेर मात्र संसदबाट पारित गर्नु पर्छ । हचुवाको भरमा एमसिसी पारित भयो भने देशका लागि दीर्घकालीन हित हुंदैन । त्यसैले यो एससीसी पारित गर्नु भन्दा […]
सबैभन्दा धोकेवाज, भ्रष्टहरुको जमात कांग्रेस हो अनि माओवादी ! -दीर्घराज प्रसाई